श्रीमतीलाई कसरी यौनसन्तुष्ट पार्ने ? – hamrosandesh.com
श्रीमतीलाई कसरी यौनसन्तुष्ट पार्ने ?
दाम्पत्य जीवनलाई हरिलोभरिलो, सुखी र सुन्दर बनाउन सेक्सको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । सेक्स अर्थात् सम्भोग । सम्भोग अर्थात् समान सहकार्य, समान साथ र समान संलग्नतामा सम्पन्न हुने क्रिया । हाम्रोजस्तो पुरुषप्रधान समाजमा श्रीमान्हरू सेक्स भनेको केवल आफूले आनन्द लिने विषय ठान्छन् । उनीहरू बिर्सन्छन् कि श्रीमतीको पनि आनन्द लिने र सन्तुष्ट हुने अधिकार हुन्छ ।
रतिक्रियामा चुम्बनको भूमिका असाध्यै महŒवपूर्ण हुन्छ । सम्भोगमा लीन हुँदा बारम्बार उनलाई चुम्नुहोस् । उनका ओठ, निधार, स्तन, नाइटो आदि अंगमा तातो किस गरिरहनुहोस् । यसले तपाईं पूर्णतः समर्पित हुनुहुन्छ भन्ने आभास श्रीमतीलाई दिनेछ ।